2 Timoteo 3 HLGN - Timoteo II 3 NA-TWI | Biblica América Latina
2 Timoteo 3 HLGN - Timoteo II 3 NA-TWI
1Kae saa asɛm yi. Nna a edi akyiri no mu mmere no mu bɛyɛ den. 2 Nnipa bi bɛyɛ pɛsɛmenkominya, aniberefo, ahohiahiafo ne ahantanfo; wɔbɛyɛ abususɛmkafo, asoɔdenfo wɔ wɔn awofo so; wɔbɛyɛ bonniayɛ na wɔrempɛ nyamesom nso; 3 wɔbɛyɛ atirimmɔdenfo, wɔrenhu mmɔbɔ, wɔbɛyɛ nnipa dinsɛefo basabasa ne abufuwpɛfo, wɔbɛtan wɔn afɛfo a wɔyɛ nnipa pa no, 4 wɔbɛyɛ afatwafo, aniɔdenfo, wɔn a wɔhoran; wɔbɛpɛ anikade sen sɛ wɔdɔ Onyankopɔn. 5 Wɔbɛyɛ aniani asomfo a wɔbɛpo tumi a ɛwɔ ɔsom no mu no. Twe wo ho fi saa nnipa no ho.
NA-TWI : Timoteo II 3